Daladda Magaalooyinka ee Horumariyayaasha Bulshada (MCCD)
MCCD waxay siisaa amaaho yar yar hal-abuuro ganacsi iyo ganacsiyo yaryar oo aan u korin sidii ay ku heli lahaayeen baananka ganacsiga ama Hay'adaha Maaliyadeed ee Horumarinta Bulshada (CDFIs). Ganacsiyadan hore inta badan waa kuwa laga tirada badan yahay-, soo galooti-, ama ganacsiyo ay haweenku leeyihiin. MCCD waa urur ku salaysan xubinnimada, oo ay ku jiraan soo-saarayaal badan oo ganacsi ku salaysan dhaqan. Waxay si gaar ah uga shaqeeyaan dadka asaliga ah, soo-galootiga iyo bulshooyinka midabka leh si ay u bixiyaan raasumaal, kaalmo farsamo, iyo tababar.
$1 milyan 10-sano amaah ah 2%; asalkiisu yahay 2019
Sababtoo ah Covid-19, McKnight wuxuu hoos u dhigay heerka ribada si joogto ah ilaa 0.75 dhibcood si uu ula jaan qaado heerka 10-ka sano ee khasnadda oo uu bixiyo dabacsanaan iyadoo la bixinayo dulsaarka hal sano.
Khabiir ku takhasusay amaahinta-yar, MCCD waxay la kulmaa 1,000 hal abuur ganacsi sannadkii waxayna siisaa 8,000 saacadood oo la-talin toos ah ganacsiyada yaryar. Diiradadeeda gaarka ah ee dhaqanku waxa ay keentay iskaashi xooggan oo ka jira xaafadaha ku hareeraysan bulshooyinka soogalootiga ah ee xooggan. Boqolkiiba 92 ee amaahda dhisaha amaahda waxa la siiyaa ganacsatada laga tirada badan yahay ee ku dadaalaya inay horumariyaan ama dejiyaan buundooyinkooda credit oo ay ka gudbaan farqiga dhaqaale. Amaahdani waa wakhti gaaban iyo dulsaar eber ah; si fiican ugu habboon bulshooyinka dhaqamada leh ee leh mamnuucida ribada, iyo deganeyaasha aan sharciga lahayn ee haysta kayd lacag caddaan ah laakiin aan helin deyn.
Inta lagu jiro xiisadda dhaqaale, ganacsiyada yaryar ayaa laga yaabaa inay ku dhibtoonaadaan bixinta qaybahooda amaahda bishii. Dhanka kale, CDFI-yadu markooda ayay la halgamayaan iyagoo ku tiirsan dulsaarka deymahan si ay u bixiyaan kharashkooda. Sababtan awgeed, deeqaha samafalka ayaa si gaar ah muhiim u ah iyadoo ay weheliso raasamaal deyn oo dheeraad ah oo amaahin ah.
Sawirka Sawirka: Daladda Metropolitan ee Horumariyaasha Bulshada, oo ay ka muuqdaan Hilibka Finer ee meheraddu taageerto.